Qaab dhismeedka 'XZ680A HDD' wuxuu qaataa jiifku. Waxay isticmaashaa nidaamka keydinta ee keydinta korontada ku xiran, oo ku qalabeysan koontarool saamiga koronto-koronto, xamaasad xasaasi ah oo xamuul leh iyo farsamada patent XCMG. Tilmaamaha farsamo ee ugu muhiimsan waxay gaarayaan heerka ugu sarreeya Shiinaha. Qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka haydarka, gudbinta, nidaamka korontada iyo sanduuqa loo yaqaan 'gearbox' waxay ka samaysan yihiin alaab caalami ah oo heer caalami ah, waxqabad wanaagsan, kalsooni wanaagsan
Astaamaha Hordhaca XZ680A HDD
1.Rack iyo pinion riix iyo jiido, gudbinta waa xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, iyo madaxa dunmiiqa dul sabayn si loo kordhiyo nolosha adeegga dunta biibiile daloolin.
Tikniyoolajiyadda sii deynta isu-dheellitirka Elastic waa in laga fogaado aaladda waxyeelleyneysa markii dhuumaha dib loo jiidayo, taas oo kordhinaysa kalsoonida.
3.Wire socodka nidaamka hagaya wuxuu socod ka dhigaa mid aamin ah
4.Mud socodka qulqulka xawaaraha stepless badbaadiyaa dhoobo iyo yareeyo wasakheynta.
Wareegga 5.Cab ee 45 ° wuxuu kobciyaa hawlgalka raaxada leh.
242/2100 kW / r / daqiiqo
Marxaladda Shiinaha III-EU Marxaladda IIIA
6LTAA8.9-C325 Shiinaha marxaladda II
Barroosinka XZ680A.06Ⅱ Barroosinka ballaaran
XZ680A.06 Barroosinka cidhiidhiga ah
Semi-otomaatiga dhajiska ah
Yaraynta Bonfiglioli / Brevini
Wiishka loor XCMG
Hoos udhaca xawaaraha socodka Kuuriya Doosan
Ku lifaaqan Dukumentiyo Farsamo
Mashiinka XZ680A HDD wuxuu bilaabmaa markuu la socdo liiska xirxirashada, ku dar dukumiintiyada farsamo ee soo socda ：
Shahaadada alaabta / Buugga wax soo saarka / Soosaarida Mashiinka / Xaaladda Hawada ee Buugga Guud Buugga Dhismaha
Buugga Tilmaamaha Hawlgalka iyo Dayactirka ee Buugga Wiishka Wiishka / Bamgareynta Bamka Mud
Hore: XZ450Plus jiingad qodista jihada jihada ah
Xiga: XZ1000A jiingad qodista jihada jihada
qalabka qodista ceelka
Rigga Qodida Rig
mashiinka qodista hdd, mashiinka qodista ceelka, Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal, HDd rig,